पढाई खर्च जुटाउन कुमारीत्व लिलाम, कति तोकिन् मूल्य ? « Anumodan National Daily
पढाई खर्च जुटाउन कुमारीत्व लिलाम, कति तोकिन् मूल्य ?
प्रकाशित मिति : १७ जेष्ठ २०७४, बुधबार ०७:०६
मानिसले कुनै पनि आवश्यकता पूरा गर्नका लागि केही चिजहरु लिलाम गरिरहेका हुन्छन् । तर, १८ वर्षकी एक युवतीले आफ्नो पढ़ाई खर्च जुटाउनका लागि कुमारीत्व लिलाम गर्न लागिरहेकी छन् ।
किम नाम गरेकी एक युवतीले एक वेबसाइट मार्फत कुमारीत्व लिलाम गर्ने प्रयास गरेकी हुन् । जुन वेबसाइटमा उनले अहिलेसम्म शारीरिक सम्पर्क पनि नगरेको जनाइएको छ । ५ फुट ८ इन्च उचाई भएकी किम रोमानियाकी एक मोडलबाट प्रभावित भएर यस्तो निर्णय गर्न पुगेकी बताइएको छ ।
मोडलले पनि आफ्नो कुमारीत्व २ मिलियन पाउण्ड (करिब १७ करोड़ रुपयाँ) मा लिलाम गरेकी थिइन् । किम आधा जर्मन र आधा अस्ट्रियन हुन् । किमले आफ्नो कुमारीत्व लिलामीका लागि एक एजेन्सीसंग कुरा गरेकी थिइन् ।
उनीसंग आफु कुमारी रहेको डाक्टरको एक प्रमाण पनिछ । तर, कसैले चाहेमा टेस्ट पनि गर्न सक्ने छन् । उनले आफ्नो कुमारीत्व लिलामीका लागि सुरुवाती मूल्य ८६, ६४० पाउण्ड (करिब ७३ लाख रुपैयाँ) राखेकी छन् । जसको २० प्रतिशत हिस्सा एजेन्सीले लिने छ ।
उनले आफ्नो इच्छा पूरा गर्नका लागि यो तरिका अपनाएकी हुन् । यसअघि पनि कैयौंले युवतीले विलासीताका लागि कुमारीत्व लिलामी गरेपनि किमले भने आफ्नो पढाई पूरा गर्नका लागि कुमारीत्व लिलामी गर्न गर्न लागेकी हुन् ।
मिश्र बने राष्ट्रियसभा सदस्यको उम्मेदवार
धनगढी / नेपाली काँग्रेसले सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट सो पार्टीका कैलाली जिल्ला विकास समितिका पूर्व सभापति नारायणदत्त
धनगढीको एयसक्राफ्ट म्युजियम नेपालगञ्ज सारिदै
धनगढी /धनगढीमा रहेको वायुयान संग्रहालय (एयरक्राफ्ट म्यूजियम) सार्न थालिएको छ । क्याप्टेन बेद उप्रेतीले लिजमा
भारतको पहलमा अफगानिस्तान सम्वन्धी बैठक हुँदै
काठमाडौँ / भारतले अफगानिस्तानको विषयमा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार (एनएसए)स्तरको सम्मेलन आयोजना गरेको छ। नोभेम्बर १०
सामीप्यता बढ्ने डरले पूर्वप्रेमीलाई भेट्न चाहन्न : दीपाश्री निरौला
काठमाडौं / दीपाश्री निरौला लगातार सफल फिल्म दिने निर्देशकमा पर्छिन् । अभिनेत्री हुँदै निर्देशनमा लागेकी
आफ्नै प्रतिवद्धता विपरित धनगढीका मेयर हमालले लिए तलव (प्रतिवद्धताको भिडियो सहित)
धनगढी / धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर गोपाल हमालले आफ्नै प्रतिवद्धता विपरित तलव सुविधा लिएका छन् ।उनले
उपप्रमुखसहित एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधीको असहमतिमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पास
धनगढी । धनगढी उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुखसहित एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधीको असहमतिमा उपमहानगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को
धनगढीका मेयर गोपाल हमाल, उपमेयर कन्दकला रानाको यसरी भयो दोहोरो आरोप्रत्यारोप
धनगढी / धनगढी उपमहानगरपालिकाको आठौ नगर सभाको तेस्रो बैठकमा नगर प्रमुख गोपाल हमाल र उपप्रमुख